Ra`iisul wasaaraha Itoobiya oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada
By Bukhari Mohamed / in Wararka, Wararka Maanta / on Tuesday, 16 Oct 2018 09:33 AM / 0 Comment / 142 views
Ra`iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban labaatan wasiir. Kala bar tirada la magacaabay ayaa noqonaya haween taas oo ka dhigeysa golhii ugu horreeyay ee haweenku ay si weyn uga dhex muuqdaan.
Wasaaradda cusub oon horay u jirin ayaa lagu soo daray wasaaradaha dala Itoobiya, waxaana wasaaradaha qaar ee muhiimka ah sida tan difaaca oo loo magacaabay haweeneey.
Wasiirada dhanka dawlad deegaanka Soomaalida ee la magacaabay waxaa ugu cadcad Axmed Shide oo loo magacaabay wasaaradda maaliyadda oo uu wasiiru-dawle ka ahaa intii uusan u wareegin wasaaradda warfaafinta.
Ra`iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa dalka Itoobiya u horseeday isbadallo waaweyn tan iyo intii uu xukunka qabtay bishii April ee sanadkaan. Isbadaladaas oo iskugu jira kuwa gudaha iyo dibadda ah ayaa si weyn looga dareemay gobolka geeska Afrika.